Pablo Nuñez: «Ka onye ọ bụla kwụsị ịnwa ịdepụta» | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Foto: Pablo Nuñez. Nkọwa Facebook.
Paul Nunez, onye edemede Lugo akwụkwọ akụkọ ihe mere eme, onye ode akwukwo dika Mụada Siza, Ndị Ohi Akụkọ o Egwuregwu Queens, nyem nka Ajụjụ ọnụ ebe ọ na-agwa anyị ntakịrị ihe niile gbasara akwụkwọ ya, mmetụta ya, ọrụ ya na mbipụta akwụkwọ na mmekọrịta ọha na eze anyị bi na ya. Ana m ekele gị nke ukwuu oge na obiọma gị.
Pablo Nuñez - Ajụjụ ọnụ
PABLO NUÑEZ: Ee, maka na m ka na-echekwa ya dị ka akụ: Nwa corsairnke Emilio dere Salgari. N'ime ndị nne na nna m nwere n'ụlọ, ọ dọlarị mmasị m site na nwata, ọbụlagodi tupu amata etu esi agụ.
Ihe mbụ m dere bụ poems na Galician, ma ana m eme ya n'ihi M hụrụ n'anya uri. Mana akụkọ mbu ... Ọ ga-eju gị anya, mana eziokwu bụ na ọ bụ Mụ nwanyị Siza, mbụ m akwụkwọ, na ọ fọrọ nke nta afọ iri atọ.
PN: Agha na udo, na Tolstoy, n’ihi na ọ banyere m n’usoro ịgụ ihe dị iche site na nke m nwere ruo n’oge ahụ. M bụ omiiko banyere (na-aga n'ihu na-eme otú ahụ) na njem akwụkwọ. Na Agha na udo Achọtara m ịhụnanya ederede nke abụọ, nke edobere na ihe omume na ebe ndị ahụ dere History.
Na mgbakwunye, site na ndọtị ya, Ọ masịrị m ịtụle ke akpa ini ahụ ibé, mgbanwe nke ogbonke ihe odide na otu onye edemede si wulite mkparịta ụka ahụ ... Na nkenke, ihe dị n'ime akwụkwọewezuga obi ụtọ dị n'ịgụ ya.
PN: N'ihi na m sitere - M si na Lugo - Agụrụ m ọtụtụ na Galician. Rosalia, Castelao, Manuel Maria, onye m nwere obi uto nke nzute. Ma ọ bụ Emilia Pardo Bazan, nke dị m ka ọ bụ onye edemede pụrụ iche.
Ọzọkwa Verne, Salgari, Dumas, Twain... Na mNke kacha nso: Tom Ezinaụlọ, Bernard Cornwell, Umberto Eco, na ndị Spain abụọ ndị ezigbo enyi na-eme ka m dị n'otu: Manel Loureiro na Juan Gómez-Jurado. Nzute ha abụọ abụrụla otu n'ime onyinye kacha mma ndụ nyere m.
Dịka ị si hụ, ọ gaghị ekwe m omume ịrapara na otu onye edemede. M adabakwa.
PN: Abụọ. Nwanyị ahụ Arwen de Onye nwe anyi, n'ihi na Tolkien zoro ọtụtụ njiri mara ya, n'agbanyeghị "izo" ya dị ka agwa nke abụọ. Ezigbo ihe.
Y Jack Ryannke Clancy dere. Ryan dị m n'aka na akwụkwọ akụkọ nke onye okike ya, na ihe nkiri na ihe nkiri telivishọn. Ugbu a na usoro.
PN: Achọrọ m ịnọ gburugburu ụfọdụ ihe metụtara ihe m dere, mma agha, mkpụrụ ego, eserese ma ọ bụ foto nke ntọala nke ndị edemede m mepụtara ga-adị ndụ.
PN: N'ihi na deena ụlọ. Agbalịrị m ya na ebe ndị ọzọ ma amaara m na enwere ndị na-enweta ya ebe ọ bụla. Enweghị m ike ime ya.
Leo otutu n'obodo m, mgbaba m, na ndagwurugwu osimiri Miño, na m hụrụ n'anya na-agụ n'ụsọ osimiri. Enwere m oge, dabara na ihe ọmụmụ m ma were oge ahụ ruo mgbe m banyere ịzụ, nke m wepụtara akwụkwọ na akpa m wee gụọ obere oge n’elu mgbidi. Eziokwu bu na m na-atụ uche ya… I nyere m echiche.
AL: Ebee ka agụụ a maka ndị Rom na ndị Celts na akwụkwọ akụkọ gị si?
PN: Esi m Lugo (na anaghị m agọnahụ ya, dị ka anyị na-ekwu gburugburu ebe a). A nabatawo obi obodo m maka afọ 2.000 site na a mgbidi pụrụ iche Rome na ụwa na saịtị World Heritage. Enwere ọtụtụ ihe nchọta ihe ochie achọpụtara, ndị a ka ga-achọta na ihe nzuzo na ihe omimi gbara ha gburugburu.
Ma mgbe ụfọdụ anyị na-echefu nke ahụ tupu bia Rome, e nweelarị mmepeanya na ọdịbendị tupu ndị agha ahụ amanye iwu ha. Galicia bụ ezigbo ihe atụ maka nke a. Anyị gbara anyị gburugburu lọ, nke nchọtara site n'oge gara aga, nke ahụ wee biri na oke nkịta ọhịa Rom.
Enwere m mmasị mgbe niile n'ịchọ ozi na mgbe ahụ dee banyere mmekorita nke omenala abuo. N'ebe ahụ ka m chọtara mkpụrụ maka Mụ nwanyị Siza.
La mmekọrịta n'etiti Galicia na mpaghara ndi ozo nke Western Europe dika Ireland, England, Ido Scotland, Wales o Brittany es akpali nnọọ mmasị na ọtụtụ agbatị na-eme ka anyị dịrị n'otu, akụkọ nke anyị, ọdịbendị, egwu ... Na ọtụtụ ọtụtụ akụkọ ifo. Site n'ebe ahụ Egwuregwu Queens, nke bu "Celtic" puru iche.
Ọzọkwa na Lugo anyị na-eme ememe, ịrụ ụtụ ma mee ka ndị dị iche iche wuru ụlọ anyị na mmalite anyị, otu oriri, Lucus na-ere ọkụ (chọọ ịntanetị ma ọ bụ netwọkụ mmekọrịta), nke dọtara ihe karịrị ọkara nde mmadụ na mbipụta ụfọdụ.
con ndị si n'akụkụ ụwa niile, site n'ọtụtụ akụkụ nke Spain, ruo Ireland, France ma ọ bụ Italytali ... Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba ọ bụla dị na Europe nwere ụdị nnọchi anya Portugal, mana kwa afọ ndị ọbịa si abịa na-eju anyị anya. Latin America, Honduras, Mexico, Argentina, Taiwanese ma ọ bụ ọbụna Australian. Ma ọ bụ site na China, n’ihi na ejiri ejima ya arụ nnukwu mgbidi ya na Lugo ya na obodo Quinhuangdao. Ọrịa ahụ kwụsịrị anyị, ma anyi ga azu.
Site na ihe niile m na-agwa gị, na ihe m hapụrụ na pipeline, n'ezie ị ghọtara agụụ ahụ karịa.
AL: Yourdị kachasị amasị gị ma e wezụga akụkọ ihe mere eme?
PN: Na thriller. Ma n'ebe ahụ ka anyị nwere na Juan bụ ezi amamihe. Ihe dị ịtụnanya bụ na ọ bụghị onye America, ọ bụ eziokwu?
PN: Emechara Ọnụ ụzọ, nke Loureiro, bu novelón. M nọnyeere Ogige ndị amoosu, nke Clara Tahoces, na Onye ocha.
Edere m, ma Jiri Nwayọọ nke ihe m choro. Ọnọdụ ọjọọ nke ọghọm ezinụlọ na-esiri m ike ịpụ. Na nke na-esote M laghachi na-agbake ndị Rom, ndị gwara m na ha na-atụ uche m.
PN: Dị mgbagwoju anya. Mana obughi n'ihi onu ogugu ndi dere ya, enwere ya oge obula, na olile anya na ayi ge adi kariri nihi na oputara na umuaka ayi guru. Ewezuga ya, ị nweghị ike ide.
Ana m agwa gị otu ahụmịhe nke onwe gị. Dika m gwaworo gi, ihe mbu m dere bu Mụ nwanyị Siza, M zigara ya Onyinye mbara ala, n’enweghi nkwupụta okwu na-enweghị pseudonym, ha wee tinye m N'ikpeazụ. N'etiti ihe karịrị narị akwụkwọ edemede ise si n'akụkụ ụwa niile. Ọ bụ ya mere m ji kwuo na ọ nweghị ihe agaghị ekwe omume ọ dịghị onye na-akwụsị ịgbalị biputere. The talent mechara ịchọta ọnụ ụzọ ma ọ bụ windo, mana ọ na-ahụ ha.
Ihe siri ike dị na ọnọdụ ugbu a. Anyị na-agbake site na nsogbu gara aga ma ugbu a ara. Ọ bụrụ na ọ metụtara anyị niile, ndị nkwusa na-ata ahụhụ, ndị na-ere akwụkwọ, ndị na-ekesa ya, ndị na-ebi akwụkwọ ... Akwụkwọ niile a na-ebipụta na azụmaahịa nke akwụkwọ a na-ata ahụhụ a nsogbu nke abuo, bụ ọbụna ihe a na-atụghị anya ya na obi ọjọọ, mana ejiri n'aka, na anyị si na ya pụta. Mụọ amụ.
PN: Ee, ọ bụ. Ezinụlọ m na gburugburu ebe obibi m, echere m otu unu niile, ndị enyi na ndị ọrụ ibe unu taa ahụhụ ọ bụghị naanị nsogbu akụ na ụba, kamakwa nsogbu ahụike, yana ndị ọrịa, yana nwute, mmerụ ahụ.
N'okwu m, Aghaghị m ịgbaba na akụkọ m chegoro. Obere oge nke oge ugbu a enwere m ike ịkọwa dị ka nke ziri ezi, mana ee, ihe kachasị m mkpa na ọkwa edemede. Nke ahụ kọntaktị na ndị na-agụ akwụkwọ Ọ bụ ihe kachasị mma nke mere m kemgbe m bipụtara, yana n'ime ụwa ọhụrụ a na-enwe mmekọrịta, ozi gị, nkwado gị nwere ekele karịa mgbe ọ bụla. Daalụ, ma tụkwasịkwa m obi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Pablo Nuñez: "Ka onye ọ bụla kwụsị ịnwa ịdepụta"
Akwụkwọ kacha mma egwu